Global Voices teny Malagasy » “Taratasim-Pitiavan’i Brezila Ho an’i Iràka” : Fampirantiana Saripika Mandefa Hafatra Fandriampahalemana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 08 Aogositra 2016 16:55 GMT 1	 · Mpanoratra MigraMundo Nandika (fr) i Henri Dumoulin, avylavitra
Sokajy: Brezila, Iràka, Mediam-bahoaka, Saripika, Vaovao Tsara, Zavakanto & Kolontsaina, Zon'olombelona
Ny fampirantiana saripika “Taratasim-Pitiavan'i Brezila Ho An'i Iràka”, ao amin'ny Ivontoerana Panamerikàna ho an'ny taokanto sy ny fanomezana endrika.
Sary : Divulgation.
[Lahatsoratra nivoaka voalohany tamin'ny teny Portiogey ny 3 Jona 2016] fanaintainana mihena, poezia mitombo, fanajàna mitombo, ny ady mihena: toa sahala amin'ny nofinofy ireny faniriana ireny ao anatin'ny fotoana iray izay anjakan'ny tsy fandeferana sy tsy fanajàna ny hafa. Kanefa asehon'ny fampirantiana saripika, “Taratasim-Pitiavan'i Brezila Ho An'i Iràka” fa azo atao ny manokatra làlana amin'ny fifikirana amin'ireny soatoavina ireny , eny fa na any amin'ny faritra misy fifandonana aza.
Tonga ao Brezila io fampirantiana io, efa naseho tany amin'ny Galerie Daratal Tasweer, ao Amman (Jordania), ary tany amin'ireo araben'i Bagdad any Iràka : asa kanto 72, fifanakalozana eo amin'ireo Breziliana 21 mpakasary sy Irakiàna 15. Fikarakaràna tontosa noho ny asan'i Renato Negrão, profesora mpampianatra momba ny sary ao amin'ny sekoly Panamerikàna, ny filohan'ny ONG “Larsa ho an'ny Zon'Olombelona” sy ny IPC-Iraq Photograph Center, izay i Abo Al Hassan no misolo tena azy.
Nandritry ny tafa iray nifanaovana tamin'i MigraMundo, manazava i Renato Negrão fa io fampirantiana io dia maniry ny hitondra hafatra iray momba ny fandriampahalemana amin'izao vaninandro ankehitriny izao, famantarana miabo eo amin'ny samy olombelona avy aminà kolontsaina samihafa. “Rerak'io fanaintainana io isika ary mila poezia bebe kokoa. Ao anatin'izay làlan-tsaina izay no nandraisana io fampirantiana io tany Iràka sy Jordania ary manantena tsara mihitsy aho fa tahaka izany no hiseho eto Brezila !!”
Sary ao amin'ny fampirantiana “Taratasim-Pitiavan'i Brezila ho an'i Iràka”. Sary : Hassan Haci, nahazoana alàlana.
Fampirantiana “Taratasim-Pitiavan'i Brezila ho an'i Iràka”. Sary : Mothna Al Hedethy
MigraMundo: ahoana no nahatongavan'ny fiarahana miasa tamin'ireo irakiana mpakasary?
Renato Negrão: Tamin'ny alàlan'ny fanasàna iray tamin'ny 2012 mba handray anjara amin'ny maha-mpakasary tamin'ilay andiany voalohany tamin'io fampirantiana io. Nanomboka teo dia nijanona ho mpinamana izahay teny anaty tambajotra ary tonga tamin'ìny taona lasa iny ny fanasàna hikarakara fampirantiana iray vaovao, hamondronana ireo breziliana sy irakiàna mpakasary.
Inona no mason-tsivanareo nentina nisafidianana ireo sary?
Nanana fitakiana vitsivitsy izahay. Satria nitodika tamin'ny fandefasana hafatra miabo io tetikasa io, nangatahako ireo mpakasary mba tsy handefa sary mampalahelo, mba hosorohan-dry zareo ny lohahevitra ara-pinoana; tsy heveriko ho hitovy fiasa amin'ny politika ny zavakanto. Ho ahy ny taokanto dia fomba iray fanehoana ny maha-olona. Ary ao anatin'ny politika dia ilaina foana ny miaro lafy iray, mandeha ho azy amin'ny fanoherana ny ankilany. Tsy tiako ampivadiana amin'ny zavatra rehetra tahaka izany ny tetikasako. Tsy tokony hiseho ao anatin'io fampirantiana io ihany koa ny lohahevitra mifandray amin'ny resaka ara-nofo sy mampientanentana.
Lehibe ihany ny vondrom-piarahamonina arabo eto Brezila. Ahitàna ireo mpifindra monina avy any Siria, Libanona, Iràka sy Palestina ao anatiny ao amin'izao fotoana izao. Karazana fifampiresahana toy ny ahoana, inona no fiantraikan'ity fampirantiana ity amin'io vondrom-piarahamonina io, mba hamotehana ireo fitsaratsaram-poana manjo azy ?
Afaka mandray anjara izy raha toa afaka misy ny hafatra iray natao hitondra fandriampahalemana ary tsy ilàna akory izay efa hevitra raikitampisaka momba ireo olana miteraka resabe. Ho ahy manokana dia mifampizara planeta iray isika, ka izay rehetra mitranga any rehetra any eto amin'ity izao tontolo izao ity dia misy akony miabo na miiba any amin'ny toerana iray hafa. Ireo tetikasako amin'ny maha-mpikarakara ahy, na amin'ny maha-mpakasary, dia mipetraka ao anatin'izay fangitra izay. Amin'ny maha-mpampianatra ahy, ezahako ihany koa ny manao izay hiampitàn'ireny hafatra ireny sy hahatakarana ny olan'ny fifindràmonina. Raha bangoina dia firenena iray maka ny hambontsika avy amin'ireo fara sy dimbintsika isika, zanakà mpifindramonina ary manana adidiy manokana amin'ny fanajàna ireo hafa tonga avy any ananona any.
Sary ao amin'ny fampirantiana “Taratasim-Pitiavan'i Brezila ho an'i Iràka”. Sary: Karina Ammar
Sary ao amin'ny fampirantiana : “Taratasim-Pitiavan'i Brezila ho an'i Iràka”. Sary: Mootaz Sami
Efa naseho tany Iràka sy Jordania ity fampirantiana ity. Nanao ahoana ny fandraisan'ny olona, raha raisina ny maha-faritra akaikin'ireo tany miady azy ?
Izay tsara indrindra mety ho hita, natrehako ny fotoana nanokafana ny fampirantiana tao Amman, tany Jordania, vavolombelon'ny fihetsehampon'ireo olona marobe nanoloana ireo sary ireo aho. Ohatra ity tovovavy kely Irakiàna mpitsoaponenana ity, miaraka amin'ny fianakaviany ao Jordania. Niato nanoloana sary iray izy, sarin'i Valerie Mesquida ary tohina tany am-pony ka niteny hoe : “Io zazavavikely mandeha tsy mikararo anaty natiora io, izaho io, ny faniriako hanana fahalalahana, ny fanantenako ny hoaviko”. Nahafinaritra ery ny nandre izany !
Reraky ny fijaliana isika ary mila poezia misimisy kokoa; ary amin'izay fomba izay indrindra no nandraisana io fampirantiana io tany Iràka sy Jordania; antenaiko ho toy izany koa no hisy eto Brezila !!
Fanirian'ilay fampirantiana ny hiampita sisintany, hitantara ireo tantara, hampifanatona sy hanova ny olona. Ahoana no fahitanao ity tetikasa ity manoloana ny zavamisy ara-politika eto amin'ny firenena sy manerantany izay manome toerana ny fihetsehampo sy ny asa maneho tsy fanajàna sy tsy fandeferana ny hafa?
Kendren'ilay fampirantiana ny hitondra hafatra fandriampahalemana, tsy ahy intsony indray izay hampiasàna izany avy eo. Ananako ny fanantenana hoe ho fahafahana iray izy io hisaintsainana momba ny fifanatonana, tsy hoe fotsiny eo amin'ny Brezialiana sy ireo mpitsoaponenana, fa koa eo amintsika samy isika izay voahodidina fifandonana mifamatotra amin'ny tsy fitoviana hevitra. Matoky ny olombelona aho, ary azoko antoka fa ny toepo miabo dia afaka miteraka fiovàna iray mankany amin'ny tsara, efa toetra voajanahary ato amiko ny fijerena ny lafiny tsara.
Ilay sary niteraka fihetsehampo ho an'ilay tovovavy irakiàna mpitsoaponenana, nandritry ny fampirantiana tao Jordania, isan'ireo sary mandray anjara amin'ny fampirantiana “Taratasim-Pitiavan'i Brezila ho an'i Iràka”. Sary: Valerie Mesquita
Sary ao amin'ny fampirantiana Taratsim-Pitiavan'i Brezila ho an'i Iràka”
Sary : Ellion Cardoso
Inona no tsapanao rehefa miverina mahita indray ireny saripika nalaina fahiny ireny ary aranty amin'izao fotoana izao ho hitan'ny rehetra ?
Ny fahatsapàna hoe nahavitra adidy, ary hoe misy dikany ny mitolona ho anà zavatra iray mikatsaka ny soa.
Inona no navelan'io asa io ho anao?
Fanamarinana ny tolona fikatsahana ny soa sy ny fandriampahalemana.
Natao ny 12 Mai hatramin'ny 12 Jona tao amin'ny sekoly Panamerikana ho an'ny taokanto sy ny fanomezana endrika – Av. Angélica, 1900, São Paulo (Brezila) ny fampirantiana “Taratasim-Pitiavan'i Brezila ho an'i Iràka”.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/08/08/86444/